किन हटेनन् अझै बिभेदहरु ?
शुक्रबार, ११ आषाढ, २०७८
रगत पसिनाले सिंचीत माटोमा
अङ्कुरित बिज हुर्काउँदै,
पल्लवित लोकतन्त्रको वृक्षमा
गणतन्त्रको रङ्गीचङ्गी फूल फुलाएर
वीरताको अमर गाथा कोरेकाहरु,
परिबर्तनको प्रतिफलबाट बन्चित भएर
गुमनाम जिन्दगी !
जीवनोपयोगी शिक्षाबाट ठगिएर
व्यापारिकरणको नङ्ग्राले चिथोरिएर
ठालुहरुको होच्याइबाट थलिएर
थिलथिलो भएका पाठशालाहरुले
बेरोजगार बहादुर र कान्छाहरु ।
औँसीले साम्राज्य गरिरहेको आधा आकाशमा
झलमलाई रहेछन् ,
पितृसत्तात्मक सोचका ताराहरु ।
असमानताको कालोपत्रे बिछ्याउँदै
एउटै पाङ्ग्राले रथ हाँकिरहेछन् ,
एक्काइसौँ शताब्दीका अर्जुनहरु ।
पहिचान लुकाउनेहरुको विवशता देखेर,
सिर निहुराउँदै मानवता झोक्राइरहेछ ।
आफैँले सजाएका मन्दिर महलहरु हेर्दै,
छुवाछूतले फाटेका मन सिलाउने मेसिन
आविष्कार नहुनुका कारणहरु,
खोजिरहेछन् आरनहरु ।
सङ्कीर्णताको माला भिरेर
अहङ्कारको टीका लगाएर
ठूलो हुने होडबाजीको मृगतृष्णामा दौडिँदै
शीतयुद्धमा भाग लिइरहेछन् ,
धर्मका अनुयायीहरु ।
हुरी बतास र बर्षादसँग
चिसो चुल्हो बोकेका श्रमजीवीका वासस्थानहरु ।
वर्गीय उत्पीडनका खाडलहरु गहिर्‍याउँदै
भोकको आगोलाई निभाउन नसकेका
अभावलाई बगाउन नसकेका
पसिनाका नदिहरु ।
सुशासनको रटानले तिर्खाएर
प्यास मेटेकाहरु सामुन्ने
ठडिरहेछन् प्रश्नका सगरमाथाहरु